Thwebula AdwCleaner 6.042 – Vessoft
AdwCleaner – isofthiwe yakhelwe ukucinga bese khipha izinhlobo ezihlukene adware. Isofthiwe aqalaze computer yakho ukuthola yiziphi izinto eziyingozi futhi ubonisa umphumela eyenza ukuba baqaphele futhi ukhiphe amafayela ezidingekayo. AdwCleaner ngempumelelo isiphumile izimakethe, wamathuluzi ngoba web-iziphequluli, izandiso ezingadingekile noma anezele kanye nezinye izinto malware. Isofthiwe uyakwazi ukususa abaduni isiphequluli shintsha lamanje ikhasi lasekhaya noma search engine isiphequluli ngaphandle kokungenela komsebenzisi. AdwCleaner ine interface enembile futhi kulula ukuyisebenzisa.
Ukususwa malware imiphumela yomsebenzi wabo
Ukubhujiswa abaduni isiphequluli
Amazwana on AdwCleaner:
AdwCleaner Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... Eset 8.0.319.0 Smart Security futhi Nod32